3 Zvino mupristi mukuru Eriyashibhi+ nehama dzake, ivo vapristi, vakasimuka vakavaka Gedhi reMakwai.+ Ivo vakaritsvenesa,+ vakamisa masuo aro; uye vakaritsvenesa kusvikira kuShongwe yeMeya,+ kusvikira kuShongwe yaHananeri.+ 2 Varume vokuJeriko+ vakavaka kurutivi rwavo. Zakuri mwanakomana waImri akavaka kurutivi rwavo. 3 Vanakomana vaHasena vakavaka Gedhi reHove;+ ivo vakarivaka nematanda+ vakabva vamisa masuo aro,+ zvihuri zvaro nemizariro yaro.+ 4 Kurutivi rwavo kwakagadzirwa naMeremoti+ mwanakomana waUrija+ mwanakomana waHakozi, uye kurutivi rwavo kwakagadzirwa naMeshuramu+ mwanakomana waBherekiya mwanakomana waMeshezabheri; uye kurutivi rwavo kwakagadzirwa naZadhoki mwanakomana waBhana. 5 Kurutivi rwavo kwakagadzirwa nevaTekoa;+ asi vakuru vavo+ havana kuisa mitsipa yavo pabasa ravanatenzi vavo. 6 Gedhi reGuta Rekare+ rakagadzirwa naJoyadha mwanakomana waPaseya naMeshuramu mwanakomana waBhesodheya; ivo vakarivaka nematanda vakabva vamisa masuo aro nezvihuri zvaro nemizariro yaro.+ 7 Kurutivi rwavo kwakagadzirwa naMeratiya muGibhiyoni+ naJadhoni muMeronoti,+ varume vokuGibhiyoni+ neMizpa,+ vechigaro choumambo chagavhuna+ wemhiri kwoRwizi.+ 8 Kurutivi rwake kwakagadzirwa naUzieri mwanakomana waHahaya, mumwe wevapfuri vendarama;+ uye kurutivi rwake kwakagadzirwa naHananiya mumwe wevavhenganisi vemafuta okuzora;+ ivo vakaisa matombo matete paJerusarema kusvikira kuRusvingo Rwakafara.+ 9 Kurutivi rwavo kwakagadzirwa naRefaya mwanakomana waHeri, muchinda wehafu yoruwa rweJerusarema. 10 Kurutivi rwavo kwakagadzirwa naJedhaya mwanakomana waHarumafi pakatarisana neimba yake;+ uye kurutivi rwake kwakagadzirwa naHatushi mwanakomana waHashabneya. 11 Chimwe chikamu chakayerwa chakagadzirwa naMarikija mwanakomana waHarimu+ naHashubhu mwanakomana waPahati-moabhi,+ uyewo Shongwe yeOvheni Dzokubikira.+ 12 Kurutivi rwake kwakagadzirwa naSharumu mwanakomana waHaroheshi, muchinda+ wehafu yoruwa rweJerusarema, iye nevanasikana vake. 13 Gedhi roMupata+ rakagadzirwa naHanuni nevagari vomuZanoa;+ ivo vakarivaka vakabva vamisa masuo aro,+ zvihuri zvaro+ nemizariro yaro,+ uyewo makubhiti chiuru murusvingo kusvikira kuGedhi reMirwi yeMadota.+ 14 Gedhi reMirwi yeMadota rakagadzirwa naMarikija mwanakomana waRekabhi, muchinda woruwa rweBheti-hakeremu;+ iye akarivaka akamisa masuo aro, zvihuri zvaro nemizariro yaro. 15 Gedhi reTsime+ rakagadzirwa naSharuni mwanakomana waKorihoze, muchinda woruwa rweMizpa;+ iye akarivaka nokuriisa denga nokumisa masuo aro,+ zvihuri zvaro nemizariro yaro, uyewo rusvingo rweDziva+ roMugero weMvura unoenda kuMunda waMambo+ nokusvika kuMatanho+ anobva kuGuta raDhavhidhi.+ 16 Nehemiya mwanakomana waAzbhuki, muchinda wehafu yoruwa rweBheti-zuri,+ akagadzira mberi kwake kusvikira pamberi peNzvimbo yeMakuva+ yaDhavhidhi uye kusvikira kudziva+ rakanga raitwa uye kusvikira kuImba yeVane Simba.+ 17 Vakagadzira mberi kwake vaiva vaRevhi,+ Rehumu mwanakomana waBhani;+ uye kurutivi rwake kwakagadzirwa naHashabhiya, muchinda wehafu yoruwa rweKeira,+ achiitira ruwa rwake. 18 Vakagadzira mberi kwake vaiva hama dzavo, Bhavhai mwanakomana waHenadhadhi, muchinda wehafu yoruwa rweKeira. 19 Ezeri mwanakomana waJeshua,+ muchinda weMizpa,+ akagadzira kurutivi rwake chimwe chikamu chakayerwa chaiva pakatarisana nomukwidza unoenda kuImba yeZvombo yaiva paChitsigiso choRusvingo.+ 20 Bharuki mwanakomana waZabhai+ akabishaira,+ akagadzira mberi kwake chimwe chikamu chakayerwa, kubvira paChitsigiso choRusvingo kusvikira kusuo reimba yomupristi mukuru Eriyashibhi.+ 21 Meremoti mwanakomana waUrija+ mwanakomana waHakozi akagadzira mberi kwake chimwe chikamu chakayerwa, kubvira pasuo reimba yaEriyashibhi kusvikira kunogumira imba yaEriyashibhi. 22 Mberi kwake kwakagadzirwa nevapristi, varume voRuwa rwaJodhani.+ 23 Mberi kwavo Bhenjamini naHashubhu vakagadzira pakatarisana neimba yavo. Mberi kwavo Azariya mwanakomana waMaaseya mwanakomana waAnaniya akagadzira pedyo neimba yake. 24 Mberi kwake Bhinui mwanakomana waHenadhadhi akagadzira chimwe chikamu chakayerwa, kubva paimba yaAzariya kusvikira kuChitsigiso choRusvingo+ uye kusvikira kukona. 25 Mberi kwake Parari mwanakomana waUzayi akagadzira pakatarisana neChitsigiso choRusvingo neshongwe inobuda paImba yaMambo,+ yokumusoro iri paChivanze cheVarindi.+ Mberi kwake kwaiva naPedhaya mwanakomana waParoshi.+ 26 VaNetinimu+ vakanga vachigara muOferi;+ ivo vakagadzira kusvikira pakatarisana neGedhi reMvura+ riri kumabvazuva neshongwe yakabudikira. 27 Mberi kwavo vaTekoa+ vakagadzira chimwe chikamu chakayerwa, kubvira pakatarisana neshongwe huru yakabudikira kusvikira parusvingo rweOferi. 28 Vapristi vakagadzira pamusoro peGedhi reMabhiza,+ mumwe nomumwe pakatarisana neimba yake. 29 Mberi kwavo Zadhoki+ mwanakomana waImeri akagadzira pakatarisana neimba yake. Uye mberi kwake kwakagadzirwa naShemaya mwanakomana waShekaniya, muchengeti weGedhi roKumabvazuva.+ 30 Hananiya mwanakomana waSheremiya naHanuni mwanakomana wechitanhatu waZarafi vakagadzira mberi kwake chimwe chikamu chakayerwa. Meshuramu+ mwanakomana waBherekiya akagadzira mberi kwake pakatarisana neimba yake huru.+ 31 Marikija, mumwe weboka revapfuri vendarama,+ akagadzira mberi kwake kusvikira kuimba yevaNetinimu+ nevatengesi,+ pakatarisana neGedhi Rokuongororera uye kusvikira kuimba yepamusoro pedenga remba iri pakona. 32 Vapfuri vendarama nevatengesi vakagadzira pakati peimba yepamusoro pedenga remba iri pakona neGedhi reMakwai.+